DAQIIQADII 18 AAD KAADHKA VERSE BY VERSE | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Salaadda PSALM18 XNUMX KARAA FURASHADA VERSE
PSALM18 XNUMX KARAA FURASHADA VERSE
Waxaan baran doonaa buugga Sabuurradii 18aad oo macnaheedu yahay aayadda aayadda maanta. Sida kuwa kale oo badan Sabuurrada, Sabuurradii 18 sidoo kale waxaa qoray Boqor Daa'uud oo ahaa Addoonkii Rabbiga. Oo wuxuu Rabbiga la hadlay erayadii gabaygan maalintii Rabbigu ka badbaadiyey gacantii cadaawayaashiisa oo dhan, iyo gacantii Saa'uulba. Waa gabay boqornimo oo mahadnaqid ah oo ka sheekaysa badbaadinta Daa'uud ee Daa'uud oo dhan Cadowga. Sabuurrada waxaa ka mid ah caddeyn jacaylkii Daa'uud iyo aaminidii Rabbiga (aayadaha 1-3), sheeko ku saabsan badbaadadiisa uu Sayidku siiyay (aayadaha 4-19), sharraxaad ku saabsan sababta Daa'uud u badbaadiyay (aayadaha 20-24), Muujinta muujinta sifooyinka Eebbe ee kuwa rumaysta isaga (aayadaha 25-30), sharraxaad dheeri ah oo ku saabsan guushii Daa'uud (aayadaha 31-45), iyo hadal mahad celin ah oo ku saabsan badbaadinta Ilaah (aayadaha 46-50).
Sabuurradii 18 waa gabay shaqsiyeed mahadnaq ah, oo sidoo kale leh astaamo boqornimo. Gabaygooda iyo mowduuca waxay u eg yihiin marag-kacyo kale oo qadiim ah oo ku saabsan wacdiyaadka taariikhiga ah ee Ilaah.
Sabuurka 18: 1 & 2 Rabbiyow, waan ku jeclahay xooggayga, Rabbigu waa dhagax weyn oo ii gabbaad ah, iyo qalcaddayda, iyo samatabbixiyahayga, Ilaahay waa Ilaahay, oo ah xooggayga, kan aan isku halleeyo, gaashaankayga, iyo geeska badbaadadayda, iyo munaaraddayda dheer.
Tani waa aayadda koowaad ee cutubka waxayna ku tusaysaa sida Daa'uud ugu dhawaaqay jacaylkiisa Ilaah iyo sida xulashada ereyada loogu talagalay inay muujiso cibaadad aad u adag. Ilaah wuxuu ahaa xooggiisa difaac iyo cabsi labadaba, Sayidku wuxuu ahaa dhammaan Daa'uud oo loogu baahnaa dagaalladii adkaa ee noloshiisa, badbaadintiisuna waxay ku iibsatay dhiig qaali ah oo Wanka daadisay.
Kanu waa sabuur 18: 3 "Waxaan baryayaa Rabbiga istaahila in la ammaano, Oo sidaasaan cadaawayaashayda kaga badbaadi doonaa.
Fikradda halkan ka jirta ayaa ah, inuu isagu had iyo goor baryi lahaa Rabbiga. Waqti kasta oo dhib iyo halista ah, wuu u tagi lahaa oo u yeeli lahaa gargaarkiisa xagga ammaanta iyo isku hallaynta isaga sidii mid ka badbaadin doona cadaawayaashiisa oo dhan.
Sabuurka 18: 4 & 5 "Waxaa i hareereeyey xadhkihii dhimashada, Oo waxaa i hareereeyey daadkii cibaadalaawayaasha, Oo waxaa i hareereeyey xadhkihii She'ool, Oo waxaa i qabsaday dabinnadii dhimashada.
Daa’uud wuxuu ka warramayaa xaaladiisa ka hor intuusan Rabbiga badbaadin ka hor imaan. Daa'uud wuxuu naftiisa halis ugu jiray inuu dhinto cadaawayaashiisa, Ilaa uu Rabbiga badbaadiyey, cabsidiisuna waxay noqdeen farxad.
Kanu waa sabuur 18: 6 Anigoo cidhiidhi ku jira ayaan Rabbiga baryay, Oo waxaan u qayshaday Ilaahay;
Waqtiga dhibaatadu waa wakhti salaadda oo ina geeya carshiga nimcadiisa. Iyo mudnaan weyn ayaa ah inaan haysanno carshi noocan oo kale ah inaan u nimaadno nimco iyo naxariis si uu nooga caawiyo xilliyada aan u baahan nahay. Ie Baahidayada ugu qoto dheer, waa inaan u qayshannaa ilaahay. Wuu maqli doonaa oo ka jawaabi doonaa baryadayada. Dhegaha Ilaah had iyo jeer waxay ku dheggan yihiin baahida dadkiisa.
Kanu waa sabuur 18: 7 "Markaasaa dhulku ruxmay oo gariiray; Buuraha aasaaskoodiina wuu dhaqdhaqaaqay, Oo wuu ruxmay, maxaa yeelay, Ilaah waa cadhaysnaa.
Marar badan Kitaabka Quduuska ah, Ilaah ayaa dhulka gilgilay. Mar baa ahayd dhulgariirkii markuu Muuse ka soo degay buurta oo uu arkay reer binu Israa'iil oo caabudaya dibi dahab ah. Markuu Ciise ku dhintay iskutallaabta dusheeda, dhulku wuu gariiray. Dhulku waa iska Ilaah iyo waxa ka buuxa. Wuu ruxin karaa haddii uu doono. Markay cadhada Ilaah wejigiisa ku soo kacdo dhammaadka da'da, dhulku wuu ruxmi doonaa si aan horay loo arag. Dhulku wuu gariirayaa si looga dareemo adduunka oo dhan. Waxaa ugu wanaagsan inaadan Ilaah ka cadhaysiin.
Kanu waa sabuur 18: 8 Qiiq baa ka soo baxay dulalka sankiisa, oo afkiisana waxaa ka soo baxay dab wax gubaya; oo dhuxulaa ka shidmay isaga.
Waxaan ognahay in cadhada ilaahay ay tahay wax aanan dooneynin inaan la kulano. Haddii Ilaah yahay dab ololaya, oo Eraygu sheegayo inuu yahay, waxay caadi u noqon lahayd cadhadiisa in afkiisa ka soo baxo sidii dab.
Kanu waa sabuur 18: 9 Oo weliba samooyinka wuu foorarshay, oo hoos buu u soo degay, Oo cagihiisana waxaa hoos yiil gudcurka.
Si uu cadho iyo aargud ugu soo dejiyo ragga sharka ah, ayuu samooyinka foorarshay, oo ammaantiisiina way muuqatay ”. Taasi waa ammaanta xooggiisa iyo gacantiisa xoogga badan ee aargudashada. Isaga oo tusaale u soo qaatay reer binu Israa'iil Ilaah wuxuu isu tusay reer banu israa'iil habeenkii dab, maalinna daruur. Wuu soo degay oo joogitaankiisu wuxuu saarnaa kursiga naxariista. Intii dadku ka walwalayeen, daruurtu waxay ahayd gudcur qaro weyn maxaa yeelay Ilaah ma arki karaan. Arrintaas darteed, wax walba cagihiisa hoostiisay, mana aha oo keliya gudcurka.
Kanu waa sabuur 18: 10 "Oo wuxuu fuulay keruub, wuuna duulay; Haah, wuxuu ku duulay dabaysha baalasheeda.
Tani waa kaliya sharaxaadda David ee ku saabsan sida Eebbe ugu dhex dhaqdhaqaaqi karo hawada iyo keruubiimta, taas oo ah, malaa'igaha, oo sidoo kale loo yaqaanno Ilaah gaadhifardoodkiisa. Wuxuu ku socdaalaa dhulka, umuu baahnayn diyaarad ay isaga qaado, wuxuu ku kacay daruur.
Sabuurka 18: 11 & 12 "Wuxuu gudcurka ka dhigay meeshuu qarsoonaa, Taambuuggiisa hareerihiisa ku wareegsanuna wuxuu ahaa biyo madow, iyo daruuro qaro waaweyn oo cirka.
Wakiilka aayadda horteena waa mid si gaar ah u habboon; Sida daruur qaro weyn leh oo dhex jooga, taas oo Rabbigu u taagan yahay sidii is-duubaya, oo uu ku dhex dhuumanayay sidii meel qarsoon oo meeshiisa dhalaalaya, daruur qaro weyn ayaa dhex martay, amase way isku dhegtay; Oo waxaa ka soo da'ayay roobdhagaxyaaleed on dhuxulo dab ah, ama hillaac daruur ka soo baxa. Ciise wuxuu jidka u furay jannada aniga iyo adiga. Maalin maalmaha ka mid ah, mugdiga daruuraha ku hareereysan Aabaha waa laga qaadi doonaa waana arki doonnaa isaga siduu yahay. Taasi waa marka sirta Ilaahay noogu soo muuqato jannada.
Kanu waa sabuur 18: 13 "Oo Rabbiguna wuxuu ka onkoday samooyinka, Sarreeyuhuna wuxuu ku hadlay codkiisii. roob dhagaxyaale iyo dhuxulo dab ah.
Onkod inta badan wuxuu ku qoran yahay Qorniinka oo lagu tilmaamay codka Ilaah. Eeg tilmaanta sharafta leh ee Sabuurradii 29: 1-11, ka dibna raacay roobdhagaxyaale iyo dhuxul dabka. Aayaddii hore waxay xustay hillaac, oo ay la socoto saamaynteeda; Tani waxay na siineysaa warbixinta onkodka iyo duufaanka roobka barafka iyo dabka wata ee ka qeybgalay.
Kanu waa sabuur 18: 14 Markaasuu fallaadhihiisii ​​soo ganay oo kala firdhiyey, oo wuxuu soo diray hillaac, oo wuu kala eryay iyagii.
Waxaan aaminsanahay in qodobka dambe uu yahay sawir kan hore. Wuxuu soo diray fallaadhihiisii ​​- oo wuxuu yidhi, Wuu soo diray hillaac; waayo, hillaacu waa fallaadhaha Rabbiga, oo waxaa jira wax aad u eg madaxa fallaarta oo ka muuqda hillaaca zegzag kaasoo dhibaya, argagax gelinaya, oo dhibaya iyaga.
Kanu waa sabuur 18: 15 Rabbiyow, canaantaadii aawadeed iyo dulalka sankaaga neefta sankaaga aawadood Ayaa durdurradii biyuhu la muuqdeen, Oo aasaaskii duniduna wuu soo bannaan baxay.
Aayaddani waxay muujinaysaa sida ay u xoog badan tahay neefta Eebbe, kaliya qiiq neefta ah ayaa ku dhici doonta dhulgariir xoog leh, oo dhulka dul mari doona, oo ka dhigi doona qaybaha hoose ee la arki karo.
Kanu waa sabuur 18: 16 "Xagga sare ayuu cid ka soo diray, oo wuu i qaaday, Oo wuxuu iga soo dhex bixiyey biyo badan. "
Dhammaan muuqaaladan isdhexgalka rabbaaniga ahi waxay ka yimaadeen xagga sare, ama xagga samada dhammaantoodna waxay ka yimaadeen xagga Ilaah. “Wuu i qabtay” Wuu i qabtay; wuu i badbaadiyey, "Wuxuu iga soo bixiyey biyo badan": Biyuhu badanaa waxay muujiyaan masiibo iyo dhibaato. Micnaha halkan ayaa ah, in Eebbe ka badbaadiyay dhibaatooyin badan iyo haliso badan oo ku hareeraysnaa. Sidii inuu badda ku dhacay oo uu halis ugu jiro halaag.
Sabuurradii 18: 17Wuxuu iga samatabbixiyey cadowgaygii xoogga badnaa, iyo kuwii i necbaaba, waayo, iyagu way iga xoog badnaayeen.
Aayaddan, waxaan ku arki karnaa in cadowga awood badan lahaa oo ay u badan tahay inuu ka adkaado sababihii, wuxuu qirtay in cadaawayaashiisu ay ka sarreeyeen isaga qudhiisa xagga awoodda wuxuuna sidoo kale qirtay inuu iska leeyahay badbaadintiisa ee aan lahayn geesinimadiisa iyo xirfadiisa dagaalka, laakiin Ilaah.
Kanu waa sabuur 18: 18 Way i hor joogsadeen maalintii aan belaayaysnaa, Laakiinse Rabbigu wuxuu ii ahaa tiir.
Fikradda halkan ka jirtaa waxay tahay in cadaawayaashiisii ​​ka hor yimaadeen, ama dhexda u xidheen jidkiisii. Iyagu waxay ku jireen jidkiisii, oo waxay diyaar u ahaayeen inay baabbi'iyaan. "Maalintii belaayadayda": Maalintii aan hadda dib u eego wakhtigayga tijaabada khaaska ah. "Laakiin Rabbigu wuxuu ii ahaa tiir" Taas macnaheedu waa, Rabbigaa i tiiriyay, oo wuxuu iga ilaaliyay inaan dhaco. Kaliya maahan inuu Eebbe laayay cadowgii Daa’uud, laakiin isaguna sidaas oo kale ayuu annagana inoo qabanayaa.
Sabuurka 18: 19 & 20 "Weliba wuxuu i keenay meel ballaadhan; Wuu i samatabbixiyey, maxaa yeelay, wuu igu farxay. Rabbigu wuxuu iigu abaalguday sidii ay xaqnimadaydii ahayd; Sidii nadiifsanaanta gacmahaygu ahayd ayuu iigu abaalguday.
Ilaah wuxuu Daa'uud ka badbaadiyey cadaawayaashiisa oo dhan, maxaa yeelay, isagu wuxuu ahaa nin qalbigiisu qalbigiisu ku farxo. Uumana aha wanaag ama istaahila in isaga ku dhex jira, laakiin waxay ahayd wanaaggiisa iyo raallinimadiisa oo waxaa la keenay samada oo ah Meesha ammaanta Masiixiga ah. Wuxuu kaloo ku abaalmariyey xaqnimadiisa. Xaqnimadu, sidaan horayba u soo sheegnay, ayaa Ilaah hortiisa la taagan.
Kanu waa sabuur 18: 21 Waayo, anigu waan xajiyey jidadkii Rabbiga, Oo qalbigaygana kama tegin Ilaahayga.
Aayaddani waxay ka hadlaysaa shuruucda uu Ilaah siiyay si loo habeeyo dhaqankeenna. Dad badan, waqtigeenna, waxay dareemayaan in waxa keliya oo ay sameeyaan ay yihiin kuwo la baabtiisay oo jannada tegi doona. Inaad ka fogaato Ilaah, ka dib markii uu idin badbaadiyey, waxay keeni lahayd in Ilaahay kuugu yeero kuwa shar leh. Baabtiisku waa aasitaanka ninkaa odayga ah ee dembiga ah kuna noolaanaya nolol cusub oo nadiif ah oo ku dhex jira Ciise Masiix.
Kanu waa sabuur 18: 22 Waayo, xukummadiisii ​​oo dhammu hortayday yiilleen, Oo qaynuunnadiisana anigu iskama tuurin.
David wuxuu sameynayaa hadal ah inaan sidoo kale ku noolaano. Wuxuu leeyahay, Ilaahow, sharcigaaga ma aan illoobin. Maskaxdayda ayaan ku hayaa oo waan sameeyaa. Yashuuca 1: 8 "Kitaabkan sharcigu waa inaanu kaa bixin afkaaga; laakiinse waa inaad ka fiirsataa dhexdeeda habeen iyo maalinba, inaad dhawrtid oo aad u samayso waxa ku qoran oo dhan, waayo, markaasaad jidkaaga ku liibaani doontaa, markaasaad liibaani doontaa.
Akhri Kitaabkaaga Quduuska ah oo ogow doonista Ilaah, ka dibna samee doonista Ilaah.
Kanu waa sabuur 18: 23 Aniguna hortiisa waan ku qummanaa, oo waan iska dhawray xumaantaydii.
Aayaddu waxay noo sheegaysaa in Daa'uud ka horjoogsaday inuu dembaabo. Tijaabadu dhammaan way ku dhacdaa. Waa inaannaan ku dhiibin jirrabaadda. Waa inaan nafteena ku xoog badnaana. Dagaalku wuxuu u dhexeeyaa waxyaabaha dembiga leh ee jirku doonayo inuu sameeyo iyo ruuxa raba inuu raaco Ilaah. Ruuxu ha ku xukumo jidhkaaga.
Kanu waa sabuur 18: 24 "Sidaas daraaddeed ayaa Rabbigu iigu abaalguday sidii ay xaqnimadaydii ahayd, Iyo sidii nadiifsanaanta gacmahaygu ay ku ahayd indhihiisa hortooda.
Sida nadiifsanaanta gacmahaygu ay ku tahay indhihiisa hortooda. Weedhan, "aragtidiisa", ayaa halkan lagu daray, si loo muujiyo in xaqnimada Masiixu uu ahaa mid nadiif ah, oo saafi ah, oo aan iin lahayn xagga Ilaah hortiisa. Sidaas darteed kuwa isaga huwan ayaa quduus ah oo aan canaanan karin, oo hortiisa laguma caddayn karo.
U fiirso aragtidan aragtideeda inay muhiim tahay inuu sax ahaado. David waxay u egtahay inuusan ugu muuqan inuu xaq ku yahay dadka hortooda. Jooji ka welwelka waxa dadka kale u maleynayaan oo bilow inaad ka farxiso Ilaah.
Kanu waa sabuur 18: 25 "Kii naxariis leh waad u naxariisan doontaa, Nin qumman ayaad u qummanaanaysaa.
Bayaanka guud waa, in Eebbe ula macaamilo ragga sida ay dabeecaddoodu tahay. Ama, in uu ku waafajin doono fal-dembiyeedkiisa si la mid ah dhaqanka ragga. Wuuna u naxariisan doonaa kuwa isaga raaca.
Kanu waa sabuur 18: 26 " Kii daahir ahna daahir baad u ahaanaysaa. Kii qalloocanna mid maroorsan baad u ahaanaysaa.
Aayaddani waxay noo sheegaysaa in kuwa daahirka ah fikirradooda, ujeeddadooda, dhaqankooda. Waxay ogaan doonaan inay la macaamilaan Ilaaha weligiis daahir ah. Ayaa jecel daahirsanaanta, oo yaa raacaya iyada oo la siinayo abaalmarin ku habboon meel kasta oo laga helo.
Kanu waa sabuur 18: 27 Waayo, waxaad badbaadinaysaa dadka dhibaataysan, Laakiinse waxaad hoos u dejin doontaa muuqaalka sarreeya.
Sida dadka Ilaah sida caadiga ah waxaa la dhibaatay dembiga, iyo musuqmaasuq ah oo qalbigooda. Iyo Shaydaanka iyo jirrabadiisa, cayda, iyo silcintiisa. Laakiin Eebbe waqtigiisa wuu ka badbaadiyaa iyaga, haddaan halkan joogin, weli aakhiro.
"Laakiin waxaan hoos u soo dejin doonaa muuqaalka sare": Ama ragga kibirka badan, oo Ilaah hoos u dhigo, Waa inaan hoos u dhignaa nafteena si aan uga helno xagga Ilaah. Dadka isla weyn ee kibir badan waxay dareemaan inay iyagu isku filan yihiin. Ma dareemayaan inay u baahan yihiin badbaadiye.
Sabuurradii 18:28 ” Waayo, waxaad shidi doontaa laambaddayda, Rabbiga Ilaahayga ah ayaa gudcurkayga iftiimin doona.
Rabbiga Ilaahayga ah ayaa gudcurkayga iftiiminaya. Taasi waa, iga soo bixi gudcurka ilaa iftiinka. Ama dhibaato ha ahaato barwaaqo ama socod gudcurka iyo ku raaxaysashada nuurka wejigiisa.
Kanu waa sabuur 18: 29 Adiga daraadday waxaan ku dhex orday ciidan, Oo Ilaahay caawimaaddiisa ayaan derbi ka booday.
Fikradda aayaddan ku jirta ayaa ah in sababuurka la soo dejiyey, uu awooday inuu cabbiro derbiyada cadowga, taasoo ah inuu ka adkaado, iyo inuu guul Ilaahay ka helo. Fikradda guud ayaa ah, in guushiisa oo dhan ay ahayd in Eebbe lagu raadsado.
Sabuurradii 18: 30Ilaah jidkiisu waa qumman yahay, Rabbiga eraygiisuna waa mid la tijaabiyey, Isagu wuxuu gaashaan u yahay kuwa isku halleeya oo dhan.
Waxaa laga yaabaa inaan had iyo jeer fahmin waxa Eebbe sameynayo waqtigan nolosheena, laakiin waxaan hubin karnaa inay tahay waxa saxda ah. Ilaah waa kaamil. Khaladka ma galo. Dhibaato kasta oo aan wajahayno xilligan; waxaan ku kalsoonaan karnaa in Ilaaheey uu xallin karo. Shaqadeenu maahan in wax la isweydiiyo, laakiin waa inaan aaminno isaga. In la haysto iimaanku waa shay, laakiin aaminaadu way dhaaftaa iimaanka.
Kanu waa sabuur 18: 31 Waayo, yaa Ilaah ah, Rabbiga mooyaane? Oo bal yaa dhagax weyn ah, Ilaahayaga mooyaane
Laga soo bilaabo bilowga waqtiga ilaa weligiis, waxaan wali isku deyi doonnaa inaan fahanno buuxnaanta cidda Ilaah yahay. Ruuxu waa mid. Shakhsiyaadka Ruux keliya ayaa ah saddex. Waxaan ognahay inuu Ciise ahaa oo uu yahay Dhagaxa. Isagu waa dhagaxa aan u baahan nahay inaan ku dhisno gurigeenna. Isagu wuxuu ahaa Dhagaxii cidlada ee Muuse ku dhuftay inuu biyo ka soo bixiyo. Isagu keliya maahan dhagaxa laakiin waa Biyaha ka soo qulqula Dhagaxaas sidoo kale. Ilaah waa wax kasta oo wanaagsan oo cajaa'ib leh. Isaga oo dhan waa dhan. Isaga la'aantiis, waxba ma qaban karo. Isaga, wax walba waan ku qaban karaa.
Kanu waa sabuur 18: 32 "Waa Ilaah kan i guntiya xoog, Oo jidkaygana igu hagaajiya."
Qoraalkani wuxuu muujinayaa in Ilaah yahay xooggeenna iyo xooggeenna wuxuuna ka saaray carqalad kasta oo caqabad ku haysa jidkeenna wuxuuna ka dhigay mid fudud oo fudud.
Kanu waa sabuur 18: 33 Isagu cagahayga wuxuu ka dhigaa sida cagaha deerada, Oo wuxuu igu fadhiisiyaa meelahayga sarsare.
Isagu cagahayga wuxuu ka dhigaa sida cagaha deerada, Dhabarku waa deerada dheddigga, waxay ku yaryihiin xawaaraha ama degdegga. Micnaha halkan ayaa ah, in Ilaah isaga ka dhigay feejignaan ama firfircoon, oo u saamaxay inuu raacdo cadawga duulaya ama inuu ka baxsado cadawga degdegaya. Oo weliba wuxuu igu fadhiisiyaa meelahayga sarsare, Oo meelihiisa adagna waa qalcad ku leh, Kuwaasoo cadaawayaashiisa ka qarsoon.
Kanu waa sabuur 18: 34 Wuxuu gacmahayga baraa dagaalka; Oo qaanso naxaas ahna gacmahaygu ku jejebiyaan.
Dadka qaarkiis way ka xanaaqsan yihiin inaan dagaal ku jirno Rabbiga. Markii Daa'uud dagaalka galay, waxay ahayd dagaal uu kula dagaallamo barakada Ilaah. Ruuxa Quduuska ah ee Ilaah wuxuu barayaa Masiixiyiinta habka loogu guuleysto dagaalka aan ku jirno. Hubkayagu ma aha bini-aadam. Hubka Masiixiyiintu waa seefta laba af leh, oo ah Erayga Eebbe.
Sabuurka 18: 35 & 36 Weliba waxaad kaloo i siisay gaashaankii badbaadintaada, Oo gacantaada midigna way i tiirisay, Oo roonaantaada ayaa i weynaysay. Adigu tallaabooyinkayga ayaad ku ballaadhisay hoostayda, Oo cagahayguna ma ay simbiriirixan.
"Gacantaada midig ayaa i kor taagtay": Naga fogee inaan ku dhicinno dabinnada iyo xumaantaas ay cadaawayaashu qorsheeyeen, waxaanan ka baqay inaan ku dhaco. “Inaan cagahaygu simbiriirixanayn” fikradda halkan ku taal ayaa ah, “Waxaad boos u ban dhigtay cagtayda si aan awood ugu yeesho inaan ku socdo socod la'aan carqalad iyo xannibaad. Waxaan ognahay in wadada xaqnimada loo maro mid cidhiidhi ah oo toosan, marka macnaheedu maaha in ilaahay waasiciyay. Kaliya waxay ka dhigan tahay in Eebbe cagaha ka dhigay mid hubo jidka.
Sabuurka 18: 37 & 38 Waxaan eryaday cadaawayaashaydii, oo waan gaadhay iyaga, dibna uma aan soo noqon jeeray wada baabbe'een. Waan wada dhaawacay si aanay mar dambe u awoodin inay kacaan, Oo cagahaygay ku soo hoos dhaceen.
Aayaddani waxay tilmaamaysaa inuusan David kaliya kicin iyaga laakiin uu lahaa awood ku filan oo uu ku dabagalo. Waxaan ognahay inuu Ilaah la jiray Daa'uud dagaalka. Tani waa sida qaylada guusha ee cadowga.
Micnaha dhabta ah ee aayaddani waa in Daa'uud ka adkaaday cadowgiisa. Markaan u fiirsano aragtida ruuxiga ah waxay la micno tahay inaad iska caabiso shaydaanka, wuuna kaa carari doonaa adiga.
Sabuurradii 18:39, Waayo, xoog baad iigu guntisay dagaalka aawadiis, Oo kuwii igu kacayna hoostaydaad ku soo tuurtay.
Xooggaas, geesinimada, iyo geesinimada uu Daa'uud haystay waxay ka timid xagga Rabbiga. Oo sidaas oo kale ayaa ah ruuxa xoogga, jacaylka, iyo caqliga fayow, ee ay rumaystayaashu leeyihiin. Waad hoosaysiisay kuwa igu kacay, oo waxaad ka hoosaysiisay kuwii igu kacay. Kaasoo isaguna hoosta ka gala dembiyada dadkiisa iyo cadawgooda kale oo dhan. Oo weliba cadowgooda ka dhiga cagihiisa.
Sabuurradii 18:40, "Oo weliba waxaad i siisay cadaawayaashayda qoorteeda, Si aan u wada baabbi'iyo kuwa i neceb.
Aayaddan dhexdeeda, waxaynu ogaan karnaa in Daa'uud si deg deg ah Ilaah ugu ammaano inuu cadaawayaashiisa gacanta geliyey. Kaliya kuma uu ridin gacantii Daa'uud, laakiin wuxuu qoortooda geliyey gacanta Daa'uud.
Kanu waa sabuur 18: 41 Iyagu way qayshadeen, laakiinse way waayeen mid iyaga badbaadiya, Oo xataa Rabbiga ayay u qayshadeen, laakiinse isagu uma uu jawaabin.
Dadkani waxay fursad u heleen inay isu dhiibaan Ilaah laakiin ma aysan helin. Hadda waa goor dambe oo ay u qayliyaan isaga. Markuu Ciise u yimaado daruuraha Mu'miniinta, waxay noqon doontaa goor dambe oo loogu talagalay kuwa si buuxda u diiday isaga. Waa inaan aqbalnaa Ciise inuu noqdo Badbaadiyahayaga maxaa yeelay waxaan rumeysan nahay.
Kanu waa sabuur 18: 42 "Markaasaan iyagii ugu duqeeyey sida boodhka dabaysha hor kaca, Oo waxaan iyagii dibadda ugu tuuray sidii dhoobada jidadka taal oo kale.
Jabka cadaawayaashayada waxay la mid noqon doontaa guul darrooyinka cadaawayaasha Daa'uud, haddii aan sii wadno u adeegidda Rabbiga, cadaawayaasheenna waa la baabi'in doonaa.
Sabuurka 18: 43 & 44 Waad iga samatabbixisay murankii dadka; Oo waxaad iga dhigtay quruumaha madaxdoodii, Oo dad aanan aqoon ayaa ii adeegi doona. Markay warkayga maqlaan way i addeeci doonaan, Oo shisheeyayaashuna way isu kay dhiibi doonaan,
Aayaddani waxay ka hadlaysaa nimcada Eebbe ku manaystay Daa'uud, iyo sida quruumuhu u aqbaleen, dadka uusan weligiis aqoon, Kuwaas oo uusan aqoon iyo xiriir toona u lahayn inay u adeegaan. Isla markiiba waxay u hoggaansamaan doonistiisa, sida ugu dhakhsaha badan ee ay fahmaan, oo waxay isu soo dhiibeen Daa'uud maxaa yeelay waxay ahayd nimcada Ilaah ee noloshiisa shaqada.
Kanu waa sabuur 18: 45 "TShisheeyayaashu way libdhi doonaan, Oo iyagoo gariiraya ayay qolalkooda ka soo bixi doonaan.
Fikradda aayaddan ku jirta ayaa ah in cadaawayaashiisa oo dhami ay wada halligmi doonaan, Oo ka baqayaan dhismahooda iyo meelaha qarsoon, ama dhagaxyada iyo buuraha ay isku halleeyaan si ay gabbaad u noqdaan.
Kanu waa sabuur 18: 46 Rabbigu waa nool yahay; oo mahad waxaa leh dhagaxayga weyn, Oo Ilaaha i badbaadiyeyna ha sarreeyo,
Noloshu waa astaan ​​muhiim u ah Rabbiga. Isagu waa Ilaaha nool marka la barbardhigo sanamyada dhintay ee quruumaha. Waa inaanay waligeen joojinin ku mahadnaqista Rabbi Ciise Masiix wixii uu noo sameeyay. Waa inaan weligeen kor u qaadno magaciisa. Ilaaha badbaadadayda ayaa ah Ciise, isagu waa Dhagaxayga weyn, Sayidow, oo Badbaadiyeheenna noloshiisu waxay ka dhigan tahay inay had iyo jeer ku noolaadaan. Isagu waa Alfa iyo Omega, Bilowga iyo dhammaadka. Annagu kuma aannu lihin kuwa sanamyada caabuda. Waxaan u adeegnaa Ilaaha nool.
Sabuurradii 18:47, Waa Ilaah kan iga aarguta, Oo dadkana hoostayda ku soo tuura.
Sayidku dadka oo dhan buu u taliyaa. Isagu waa Abuurahayaga oo isagu leh xukun buuxa oo ku saabsan abuurkiisa. Uma baahnin inaan ka walaacno cadaawayaasheenna maxaa yeelay isagu wuu iiga aargudaa aniga ama aniga. Aargudashada waxaa iska leh Ilaah oo keliya, oo isaguna wuu ku abaal mariyaa, oo dadkiisa ayuu u shaqeeyaa. Eebbe waa aarsadaa.
Kanu waa sabuur 18: 48 Isagu wuxuu iga badbaadiyaa cadaawayaashayda, Haah, oo adigu waxaad iga sara marisaa kuwa igu kaca, Oo waxaad iga samatabbixisaa ninka dulmiga badan.
Daa'uud wuxuu ka adkaaday cadaawayaashiisii ​​oo dhan. Saa'uul taas ugama badbaadin. Ilaah Saa'uul wuu ka saaray oo Daa'uud buu boqray. Mid ka mid ah waxyaalaha aan ku aragno arrintan ayaa ah xaqiiqda ah in Saa'uul u maleeyey inuu ka adkaaday Daa'uud, laakiin Daa'uud wuu kacay. Ficilkii uu David u maleynayay inuu ka takhalusi lahaa Daa’uud wuxuu ahaa guulwade David ugu weynaa.
Kanu waa sabuur 18: 49 Sidaas daraaddeed, Rabbiyow, anigu waxaan kuugu mahad naqi doonaa quruumaha dhexdooda, Oo magacaaga ammaan baan ugu gabyi doonaa.
Fikradda halkan ka jirta ayaa ah inuu samayn doono qirasho guud oo ku saabsan nimcooyinkaas uu helay; ama wuxuu ka dhigayaa amaanta Ilaah in lagu xuso quruumaha dhexdooda ama kuwa jaahilka ah, natiijada ka dhalatay wixii Ilaah isaga ku sameeyey.
Kanu waa sabuur 18: 50 Samatabbixin weyn ayaa siisa isaga boqorkiisa; oo wuxuu u naxariistaa kii uu subkaday, Kaas oo ah Daa'uud iyo farcankiisaba weligiis iyo weligiis.
Tani waa aayadda ugu dambeysa ee cutubkan, waxayna noo sheegeysaa sida Daa'uud looga badbaadiyay cadaawayaashiisa. Tani waxay ka hadlaysaa Masiixiyiinta markay ka hadlaysaa farcankiisa. Waxaa naga badbaadiyay cadaawayaasheen. Naxariistiisa iyo nimcadiisa ayaa ah rajadayada.
Goormaan u baahanahay Sabuurradaan 18?
Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay goormaad ubaahantahay Sabuurradaan, waxaadna hoos ka eegi kartaa xaaladaha qaarkood markay tahay inaad isticmaasho Sabuurka 18
Markay xadhkihii dhimashada iyo diiqadda igu dheceen
Markay dabinnada jahwareerku iga hor yimaadeen.
Markay durdurradii is-halligaadu igu adkaadaan.
I bar si aan is-hoosaysiisto oo indhahayga hoos u dhig markii kuwa kibirsan.
Ilaahaygu gudcurkayga wuxuu u beddelaa iftiin.
Sayidow, wuxuu iga soo bixiyey yaamayska moolka dheer.
Sayidow, waxaad tahay dhagax weyn oo ii gabbaad ah, iyo hoygayga iyo samatabbixiyahayga.
article PreviousPSALM 16 macnaha aayadda aayadda
Next articleDAQIIQADII 21 AAD macnaha aayadda aayadda
60 Salaada Subax ee Shaqada Kahor Shaqada
5 Qodob Oo Ducada Ku Saabsan Ninka Qiyaanay
30 Dhibcaha salaadda ee kor laga helo